Duuba warri dur gaallan gaafa humna qabdu miite gaalla humna dhabde argatanii biyya gaalla'aa tan isaanitti aantutti duulanii, cabsanii gaallaa walii hin dirmanne arganii, ammas biyya gaala'a taanitti siqan hanga biyya gaalla'aa hunda qabatanitti. hanga waan isaan biyya gaalla'aa godhan hunda , akkaataa isaan itti cabsan hunda, akka itti isaan gabroonfatan hunda, barreessanii ilmaan isaanii barsiisanitti. hang Waan isaan biyya gaalla'atti dalagan hunda, taareiikhni addunya'aatifii, taariikhni warra gaalla'aafii biyya gaalla'aa gabroonfate barreessetti . kan waa takka irraa hin dhiisin. maqaa isaanii kan gaafa san qabaniin barreessan, sun: (gaallaa) jechu'u. Duuba ilmaan oromo'oo waan warri abbootii isaanii gabaroonfate barreesse, dubbisanii yookaa qara'anii, akkasuma waan taariikhni addunya'aa gaalla'aafii warra gaallaa gabroonfaterraa barreesse, yookaa katabe, biyy alatti qara'anii yookaa dubbisanii, hoggaa biyya isaanitti deebi'an kan akka taaddasaa birru'uu, ummata isaanii waan dhuysa'aan alatti baratn kan taariikha Gaalla'aa yookaa oromo'o'tti rarra'u, ummata isaanii barsiisan dhoysa'aan. maaliuf mangistiin akkasitti abbootin isi'ii gaallaa miite taariikha gaalla'aatifii aadaa isaanii baratanii barsiisuu dhiisii maquma gaalla'aatuu maqaa dhawuu hin feetu hin eehamtu.
Waa takka namuu haa beekhuu: Taariiikhuma jechuun bar waan dabre himuu hamaadhafii gaarii waanuma argamuu Ammas wanni beekhun nurra jiru: diinni, yookaa nyaabni ummataa, taariikha ummatarraa waan hamtuu malee, waan gaarii hin himu, ummata qalbii caphsu'uu jecha. akka ummanni sababaa waan isaan kijibaan odeessaniif jecha, if jibbee, maqaa ifii jibbee akka waan takkaa biyya sanitti hin argaminii if seye, hanga ummnni keenya maqaa tokko, kan yoo yaamamaniin ummanni hundi maqaa keenya je'ee, owwaatu dhabe, takkatti. yoo maqaa gosaa takkaa, maqaa dalaga'aa taate malee, gaafas maqaan bakka hundatti dhagayamu, kan kitaabban taariikhaa keessatti bareeffame, kan dachiin isaani isatti qindeeffamte, maqaa gaalla'aati. sanumaan wajjin yoo ati gaallaa jetteen an gaalla'aa miti. inumaa si dhawu'uuf sitti utaala, haatayuu Rabbiin naa laaffisee, radiyoonarra maqaa tokko qabatu'utti yaame yaamnan afaan qottu'uu malee maqaa biraa hin qeeballu hin eehamnu, je`e warri baya harar akkasittan faraqaa afaan qottu'uu jecha'aan raadiyoona Maqdisho'orraa dabarsuu ture duuba odo'on akkasitti oofuu janaraal taaddasa gabreen qundaal waraanaa kan mootummaa haylasillaase'ee, jumhuuriyyaa soomaalie'ee daaw'ii dhufee, jaallee ziyaad barree dubbisee akki je'een afaan kun afaan Gaalla'aati je'ama malee afaan qottu'uutii , miti. achirraa jaallee ziyaad xalayaa natti ergee, barnaamija qottu'uu barnaama Gaalla'aatti jirjiiraa nuun je'e, akkasitti barnaamja afaan gaalla'aa jennee, raadiyoona maqdasho'orraa dabarsuu turre.
Gaafas wannin ummata keenyan je'uu ture : taariikha oromo' oo hunoo sinii himee irrumaan tuttuqee yoomin hundaa himee
bar taariikhni saanii waan nama jabeessuu bakka hundaa namuu walii haa odeessuu
bakka hundaa namuu walumatti kaasee biyya hundaa namuu waan f edhhu argatee
xiqqa'aa gudda'aan baraakkaan jabaatee wanni jabaataniin harka tokko tayu
bakka hundaa namuu mariin takka tayuu ilmaan oromoodhaa wanni saan eeggatuu
bakkuma marattuu harka wal qabatu abbaan saanii tokkoo afaan saanii ajjii
ammas hundi saanii waliin qaban hujii taariikhni oromo 'oo tokko tayuu garree
ee maa bakka hundaa isaan walin barree maqaan saanii tokko dachiin saanii takaa mee namni akkanaa rakookkamiin arkaa
dhiirafii dhalaadhan walis jaalattanii baraa nam tokkolleen isin duran bayuu
dhiirummaa teessanis namuu haa dhagayuu qananiin teessanii isunuu beytanii
waa takka haa beekhuu bakka hundaa namuu kan oromoo miidhuu numa miidha namuu nam tokkolleen isaan miidhuu waan dandayuu oromoon feenee biyyarraa haa bayuu kan oromoo mormoo takkaayuu diinumaa takkaayuu galtu'uun sudaatinanaa homaa
oromoon guddinaa nama hundee qabuu nama heddumminaaf dachii gudoo qabuu
takkaan galchaa mee Waaqa keessanii kan isin kabajuu galata argataa
namni isin tuquu borutti rakkataa yaa Rabbi jabeessii gaallaa islaamattii
waanuman dubbadhes nama jaalachiisii adhafii gaarii addumaan beysisii
Copyright © 2008 rashaad All rights reserved. filadhu : asirraa bakka filadhu